ⓘ सिरियाली गृहयुद्ध
सिरियाली गृहयुद्ध सिरियामा चलिरहेको बहु पक्षीय शशस्त्र युद्ध हो मुख्य रास्ट्रपति बसर अल असद नेतृत्वको सिरिया अरब गणतन्त्र बिद्रोही बिचको गृहयुद्ध हो |
द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिला सिरियाभित्र राष्ट्रपति बशर अल असदको राष्ट्रपतित्वमा उच्च बेरोजगारी एवम् भ्रष्टाचार भएको र राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको भनेर गुनासो सुनिने गरिन्थ्यो।
असदले सन् २००० मा आफ्ना बुवा हाफिजको निधन भएपछि सत्तारोहण गरेका थिए।
छिमेकी देशहरूमा भएको "अरब क्रान्ति"को प्रभावमा सिरियाको दक्षिणी नगर डेरामा मार्च २०११ प्रजातन्त्रको समर्थनमा प्रदर्शनहरू भए।
सिरियाको अस्थिरता २०११ को अरब क्रान्तिको लहर संगै बड्दै गयो। असद सरकारलाई हटाउनको लागि व्यापक विरोध प्रदर्शनहरु भए। सरकारले विरोधीहरूलाई दमन गर्न व्यापक बल प्रयोग गरेपछि राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू भए। १५ मार्च २०११ मा दमास्कस र एल्लेप्पो मा सुरु भएको युद्ध विभिन्न पक्षमा लडिए: सिरियन आर्म्ड फोर्स र यसका अन्तरास्ट्रिय सहयोगी, सुन्नी सिरियन बिपक्षी विद्रोही समुह फ्रि सिरियन आर्मी र अल नुस्रा लगायतका सलाफी जिहादी सहित, कुर्दिस-अरब समुह सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF, र आइ एस आइ एस,। इरान, रसिया, टर्की, साउदी अरब, अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरु पनि एक पक्षा वा अर्को पक्षलाई सहायता दिए पछि यो छद्मयुद्ध भयो।
अस्थिरता बढ्यो र दमन पनि सघन भयो। विपक्षीहरूले हतियार उठाए।
पहिला आफ्नो सुरक्षाका लागि र पछि आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू आउन नदिन।
"विदेशीले उकासेको आतङ्कवाद" भन्दै असदले त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्घोष गरे।
हिंसा तीव्र गतिमा बढ्यो र देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्‍यो।
2. लडाइँ केका लागि?
अहिले यो लडाइँ असदका समर्थक र विरोधीबीच मात्र सीमित छैन।यसमा आआफ्ना उद्देश्य भएका समूह र देशहरू पनि संलग्न हुन आइपुगेका छन्। त्यसले गर्दा परिस्थिति अति जटिल भएको छ र द्वन्द्व लम्बिएको छ।ती समूह र देशहरूलाई सिरियाभित्र रहेका धार्मिक समूहबीच घृणा फैलाउन उक्साएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
बहुमतमा रहेका सुन्नी मुसलमानको समुदायलाई राष्ट्रपतिको शिया अल्वाइट सम्प्रदाय विरुद्ध उकासिएको आरोप छ।
त्यस्तो विभाजनले दुवै पक्षबाट अत्याचार हुने गरेको र अशान्ति बढेको छ।
उनीहरूले जिहादी इस्लामिक स्टेट र अल काइदालाई पनि फैलिन दिएका छन्।
स्वशासनको अधिकार भएका तर असदका फौजसँग नलडेका कुर्दहरूले सिरियाको द्वन्द्वमा अर्को आयाम थपेका छन्।
3. युद्ध पक्ष
सिरिया अरब गणतन्त्र सहयोगीहरू
सिरिया सशस्त्र सेना
राष्ट्रिय रक्षा बल
सिरियाली गृहयुद्धमा हिजबुल्लाहले बसर अल असदको पक्षमा लड्यो । हिज्बुल्लाहको प्रमुख सहयोगी इरानबाट उसले सिरियाको बाटो हुदै हतियार सैनिक सामग्री आयात गर्छ। यदि सिरियामा बसर अल असदको सत्ता पल्टियो भने हिज्बुल्लाहलाई समेत संकट पर्ने भएकाले, उसले असद सत्ता टिकाउन पुरै बल लगायो ।
विदेशी शिया मिलिशिया
Wikipedia: सिरियाली गृहयुद्ध